umbono Iindawo zokugcina amanzi ishicilelwe ngenyanga 1 edlule
Iindawo ezininzi zeNdawo yokuThengisa eLuzira
Kwi-2bn ... I-Acarde ebekwe ecaleni kwendlela i-Port Bell kwintengiso eyi-2billion eqokelelwa umvuzo wenyanga nge-15m Ukulungiselela ukujonga, nceda usitsalele kule nombolo 0704505917/0750383520/0788389584 okanye undwendwele ii-ofisi zethu kwilali ekuthengiswa kuyo naalya ngasemva komgangatho.
Indawo yokuhlawula irente e-Entebbe
Le ndawo yokugcina izinto ifumaneka kwindawo ekhuselekileyo ekhuselekileyo ebanzi kakhulu enezigaba eziphezulu, igumbi leofisi, izindlu zangasese kuzo zombini iintlobo namanenekazi, indawo evulekileyo enamamitha-skwere ayi-1000. Indawo yokugcina kwimizuzu esi-8 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya ihamba ngeedola ezingama-6000 ngenyanga.Qaphela: zonke izinto ezibonwe ...
Indawo yokurenta eKampala
Izindlu ezintle zerenti kwindawo yemizi-mveliso yesitalato enomgama ongaphezulu kwe-4000 yeemitha ezizayo kunye neeofisi ezizimeleyo kunye nendawo elungileyo yokuhlala
Indawo yokuthengisa ethengiswa eLuzira
Indawo yokuthengisa ethengiswa eLuzira ineendawo zokugcina ezi-9, i-5000 yeemitha ezili-2 kwi-93 Acres yomhlaba ngesivumelwano seminyaka engama-27,000 kwaye ingavelisa ama-3,500,000 eedola ngenyanga, abaqeshi bangoku kwaye ekugqibeleni ixabiso lokuthengisa le ndawo li-XNUMX XNUMX yezigidi zeedola ekuthengwayo.
Iinjongo ezininzi zeNdawo yokurenta kwaNtinda
Ukuzisa!! I # Ntinda Ivenkile izaphulelo kumgangatho we-400k kunye nama-300k aphezulu. QAPHELA (uhlawula i-3months kwaye ufumane i-2months yasimahla). Qala ishishini lakho namhlanje ..
Izithuba ezininzi zeNdawo yokurenta eKololo
Amagumbi angama-20, igumbi elikwientliziyo zaseKololo ezinamagumbi okuphefumla enomgangatho ophantsi, umgangatho wokhuni kunye ne-24 / 7hr yokhuseleko ukogqitha indawo.Indawo ilungele ihotele, isibhedlele, ibha njl njl. Irente eyi-18,000 yi-Usd ngenyanga.
Indawo yokuhlawula irente ku-Ntinda
Sineemitha ezingama-25000 zeemitha zokugcina iindawo zokugcina iindawo zemveliso kwindawo yeNdawo / Ntinda / Banda. Ezi ndawo yokugcina izinto zilungele iifektri, ifenitshala, iimveliso zococeko, iimveliso zokutya, iikhemikhali, iziselo, iimoto kunye nezinto ezithengiswayo ngokubanzi.Sinobukhulu obahlukeneyo bokugcina ezindlwini 1, 5 ...
E papashwe ngu Boniface M